Hiriira Mormii Bilxiginnaa, Minnesota, Minneapolis – Kichuu
HomeNewsAfricaHiriira Mormii Bilxiginnaa, Minnesota, Minneapolis
Hiriira Mormii Bilxiginnaa, Minnesota, Minneapolis
Hiriira Mormii Bilxiginnaa, Minnesota, Minneapoli
Oromo Tigray Sudan Ethiopia Report
Oolmaa gaddisiisaa #Walloo har’aa laalchisee gabaasa hayyuu dhimmacha itti dhiheenyaan hordofaa oole
Hassen Hidaya irraa akkuma jirutti:
Walumaa galatti hanga ammaatti wanti jiru maal fakkaata?
Humni addaa naannoo amaaraa qaama callisaa fi siyaasaatiin hogganamu maqaa fi moggaasa kijibaatiin ummata (qotee bulaa) bulchiinsa saba oromoo walloorratti daguuggaa sanyii raawwachaa jiraachuun osoo bekkamuu fi hoggansa kennamaa jiruun qe’een ummataa magaalaa kamisee ganda mata horoo, Aanaa harxummaa fursii fi jiillee ganda cirrii, diidoo akkasumas ganda wasenqurqur fi baalcii gubsiisaniiru.
Akkasumas magaalaa shawaa roobititti qotee bulaan madoo fi poolisoonni uffata komishinarii poolisii naannoo amaaraa godhatan sababa afaan oromoo dubbatiif jecha aduu guyyaatiin kan rasaasaan, kan hafan akka bofaatti dhagaan tumamanii ajjeefamaniiru.
Waan miidiyaa, aangoo fi haalmijjee harkaa qabnuuf jecha “ajjeesanii geeraruun” kan ajjeechaarraa hafe akka baran hidhanii dararuuf haala mijjaawaa ummachuuf jecha miidiyaalee aantummaa gartokkee qabanii fi kallattiima itti kennamee kana lafa qabsiisanii dhugaa dabsuuf dalagan kanneen akka ATV, FANA, ESAT fi kallattiidhaan paartiilee finxaleeyyiin dhaabbatanii hafarsuun haqa ummataa awwalaniiru.
Gandi qotee bulaa konkolaataa fi beenziila humna addaa naannoo amaaraatiin gubate ummata walloorratti godaannisa hin fayyamne kan uume tahuun sirriitti hubatamuu qaba.
Wanti beekamu qabu xiinsammuu fi qorqalbiin oromoota walloo kan kanaan hin cabnee fi hinjilbiiffanne akka tahe diinnis firris nibeeka, beekuus qaba. Sababni duguuggii sanyii har’a nurratti raawwatamee inni jalqabaa ilaalcha finxaalessootaa fi gaggeessitoota isaaniin harkifamanii ”’Amaarri wallaggaarratti ajeefamaa asitti nagaan jiraachuun gonkumaa hinjiraatu,”’ jedhu yoo tahu, lammaffaan ”gaaga’ama dhalattoota ummata amaaraa oromiyaa keessa jiruuf qabdiin keenya isini” ilaalcha jedhuuf gumaacha kaffalamaa jiruudha.
Oromoon walloo badii hamaa lubbuu, barbadiinsa qabeenyaa fi gubannaa qe’ee jireenyaa isaa irratti tahaa jiruuf kan mataa daakkatu osoo hin taane ittiin boona. wareegama baramaa kaffalamaa asgahes waan taheef borus wareegama qaalii lubbuuf qabeenya kana caaluuf illee qophiidha.
Lolli dugguuggaa sanyii fi babal’ifannaa daangaa Humnoota Naannoo Amaaraan Oromoo Walloo irratti barootaaf adeemsifamaa ture, tibbana daran jabaachuun, Jimaata dheengaddaa irraa qabuun Lola Poolisoota Humna Addaa Naannoo Amaaraa Raayyaa Ittisa Biyyaa Impaayera Itoophiyaan deggeramaniin Onootaa fi Magaalota Walloo adda addaa irratti adeemsifamaa jiruun, Lubbuun Oromootaa dhibbaan lakkaa’amu ajjeefamuu, Kumaatamnis madaa’uu, qabeenyi Oromoos akka-malee barbadeeffamaa jiraachuu.
Oromoota Magaalaa Finfinnee fi Magaalota Oromiyaa naannawa Finfinnee jiran keessa jiraatan irratti sakattaan addaa geggeeffamaa jiraachuu.
RSWO – Bitootessa 21, 2021
Manni murtii Federaalaa dhaddacha yakkaa Lidataa olmaa guyyaa har’aa ooleen, jecha amantaafi waakkii galmee Obbo Jawaar Mohammad jalatti namoota himatanii dhaggeeffatee jira.